Chii chekuita kana hemp ichiedza kupisa? Zinga reTHC uye rako bhizinesi
Chii chekuita kana hemp ichiedza kupisa
Chii chinonzi Hot Hemp?
Watch Cannabis Viwanda Gweta, Tom, tsanangura zvekuita kana hemp ichiyedza kupisa kune yayo delta-9 THC level.
Fona nezve yako hemp yekuongorora inopisa
Kutsvaga Hemp Bhizinesi Ruzivo - Click Here.
"Hot hemp" zvinoreva hemp iyo yakaderera-9 THC mazinga akapfuura iyo 0.3% chikumbaridzo chakaiswa nehurumende uye nemubatanidzwa mutemo. Kazhinji mitemo yenyika inobvumidza kumwe kwakawandisa uye kushomeka kwakanyanya, kudzokorora, uye kudzivirirwa kubva pakusaziva kwekurima hemp iyo inoedza inopisa pamazinga ayo eTHC. Kuvhiringidzika kwakawanda kuripo pamusoro penzira dzekuedza dziripo uye yakaderera muganho wepakati pakati pe Delta-9 THC uchienzaniswa neetetrahydrocannabinolic acid (THCa) inokonzera matambudziko nekuyedza hemp chirimwa kuti itevedzere pamwe nechirevo chezvemaindasitiri hemp - inova cannabis neiyo THC yakavanzika. kubva mazviri, kana angangoita 99.7% yayo. Kukudziridza kubva kumbeu sekuenzaniswa nemakungu kana tsika dzehutu zvinomutsa njodzi ye "kupisa hemp." Chizvarwa cheF Type, F1 ichienzaniswa neF5 semuenzaniso, chinopawo kugadzikana kweiyo hemp's THC genetics.
maitiro ekudzivirira kupisa hemp
kutenga nekondirakiti yakanyorwa
shandisa yakasimbiswa hemp mhodzi
kurisa iyo hemp nenzira imwechete iyo yaive yakakura payakasimbiswa
dzivirira kushungurudza zvirimwa zvako
bvunzo panguva inoyerera neHPLC
nyatsotarisisa hemp yekubvira
tevedzera zvinodiwa nenyika yako yekukohwa zvekutaurisa
kana bvunzo inopisa ichiuya inoruramisa kana zvichikwanisika uye bvunzo zvakare
Fonera Gweta rako kana dambudziko rikasvika pakugogodza
Mazano eHemp Anoyedza Kupisa
Saka varimi vazhinji vanotarisana nezvazviri kana zvasvika pakuongororwa hemp. Hhem yavo inoyedza inopisa pane dzakawanda nguva, uye ndipo panouya kana mahofisi kunzvimbo yacho. Kuti udzivise mamiriro ezvinhu aya, iwe unofanirwa kuziva zvekuita apo hemp yako inoongorora inopisa. Heano mhinduro.
Ndezvipi zviri Official Mitemo
Muzhinji nyika, iyo yepamutemo muganho we Mazinga eTHC mune hemp ari 0.3%. Izvi zvinoreva kuti hemp yako inofanirwa kuve nechero chaiyo kana yakaderera huwandu hweTHC. Kuedzwa kunoitwa nenzira dzakasiyana, asi zhinji dzadzo dzinoyera mwero wezvikamu muhemp. Kuparadzaniswa kwe cannabinoids, terpenoids, uye flavonoids ndiyo nzira yakajairika yekufunga kana hemp ine kugovera kwakakwana kwezvinhu.
Kuyera ma parameter aya kunogona kukanganisa chimiro chehemp. Apa ndipo panosangana matambudziko. Kana iyo yekuedzwa isina kukwana, hemp yako inogona kuratidza yakakwira mazinga eTC, ayo anoisa iwe munzvimbo yekubvunza rubatsiro. Mazhinji magweta anogona kukubatsira kugadzirisa dambudziko iri nekuti kuyedza kunogona kuchinja uwandu hweTHC hwehemp. Zvakanaka kushandisa nzira dzekuyedza dzepamutemo idzo dzinokupa yakachengeteka izere kana zvasvika kune iwo mazinga eTHC mune yako hemp.
Varimi munyika yese vane mhando dzakawanda dzakasiyana uye kudyarwa kwembeu imwe neimwe kunogona kunetsa zvakanyanya. Kazhinji yenguva, mhodzi nyowani dzinoiswa muvhu dzinoendesa mamwe makemikari uye dzakasarudzika huwandu hweTHC. Izvi zvinonyanya kuoneka mugore rekutanga rekusakura.
Kutevedzera mitemo, varimi vanofanirwa kushandisa mbeu dzakaratidzirwa kana zvasvika pakuongororwa kweTHC. Panguva imwecheteyo, ivo vanofanirwa kutarisisa nzira dzekucheka dzinogona kuwedzera kana kudzikisa mhedzisiro yekuongororwa kweTHC.
Mushure mekupedza maitiro ekuraira, hemp iyo isina "kuchengeteka" yekushandisa inofanira kuparadzwa, rino idambudziko rakakura kuvarimi vakaisa mari yakawanda kwazvo mukukura kwese. Vanofanira kubvisa mhodzi dzese uye kutanga pamusoro mwaka unotevera.
Kuva mune indasitiri yehemp iri kukupa yakawanda mikana yekuongorora musika. Pane dzimwe nguva, hemp inogona kuyedza kupisa asi iyi hemp inogona kushandiswa kune dzakasiyana siyana zvigadzirwa. Kana iwe uri kuita chinodzora chiitiko kuti ukure hemp yekuvaraidza kushandiswa, saka iwe unogona kuva nehemp iyo inoedza kupisa.
Kune rimwe divi, kana mbeu yako ikataurwa kuti ishandiswe pakurapa, haugone kutamba. Muchiitiko ichi, mazinga eTHC anofanira kunge ari chaiwo. Nzira yakanaka yekuchengetedza iyo nhanho panzvimbo yakachengeteka ndeyekutarisisa nhanho yega yega yekukura.
Chii Chaungaita Kana wako Hemp Achiedza Hot
Kana yako hemp bvunzo ichipisa, iwe une dzakasiyana mhinduro. Imwe yadzo ndeyokuwana yechipiri maonero kana zvasvika pakuedzwa. Iwe unogona kutumira hemp yekuwedzera yekuedzwa iyo inoongorora izvo zvinhu zveTC. Kana iyo yechipiri yekuedza ikaratidza iwo mhedzisiro yakafanana, yako hemp zvirokwazvo ine yakakwirira mazinga eTC.
Chimwe chinhu chekuita kana hemp yako ichionesa kupisa iri kubata wako mutengesi wembeu. Vazhinji vatengesi vane mutoro wehunhu wembeu, uye havafanirwe kubvumidza kutengesa mbeu dzisina kukodzera kuvarimi. Kana vakaita izvozvo, vari kutyora mutemo, uye unogona kutanga nyaya yacho. Vatengesi vembeu vanofanirwa kutevedzera zviri pamutemo zviga kana zvasvika pahuwandu, chimiro, uye kusiyana kwembeu. Vanofanira kukuzivisa iwe nezve zvigadzirwa zvembeu yauri kutenga kubva kwavari.
Kana iwe uri kuita chibvumirano nemutengesi, zvakanaka kuti uverenge zvese uye kuongorora izvo zvinhu. Mitemo nemirairo zvakanyatsotsanangurwa uye hapana nzvimbo yekuratidzira. Kana muchibvumirano chichigara kuti mbeu yako yakakura zvakanaka uye nekurimwa kwakaringana, saka une kodzero yekuziva kuti hemp inokwanisa sei kusvika pamazita akarambidzwa eTC.
Kugadziriswa kwakanyanya kwaungaita kana hemp yako ichionesa kupisa kuri kudaidza gweta rako. Fonera Gweta iro rakadzidziswa mune ino ndima, kuti iye agokwanisa kupa rubatsiro rwakakodzera. Kukura hemp maitiro akaoma uye mirau inoita basa rakakosha. Gweta rako rinofanirwa kusvitswa kumatare, kunyanya kana iwe uchifunga kuti wakanganisika mukuita uku.
Kana hemp yako ichionesa kupisa, mhinduro yakanakisa ndeye kuparadza iyo hemp. Kuparadza kunogona kuve kwakaomarara nekuti wakaisa mari yakawanda nenguva nenguva. Nekudaro, ndiyo chete nzira yekubvisa hemp iyo isina kukwana uye inotarisa pane hemp iri kumusoro kwemirairo.
Paunoparadza hemp, ita shuwa kuti hapana zvasara zvasara. Munzvimbo dzisina kukwana hemp dzakaramba dzakadaro, ivhu rino chengetedza hunhu hwe hemp nembeu dzese dzemangwana dzinogona kuwanza hunhu hwepamberi hwehemp. Nechikonzero ichocho, zvakakosha "kunyatsochenesa" nzvimbo yacho.
Mune dzimwe nguva apo hemp yako inoyedza inopisa, zviri nani kuve nerutsigiro rwevakuru vanodzora. Kana ivo vari kuwana mhodzi idzo dziri kupfuura iyo yeTHC level, vanogona kukupa zvakanaka pamari. Varimi vazhinji vanowana kwazvo yakadzika faindi, kunyanya kana madanho eTHC asiri mazhinji. Kune rimwe divi, varimi vasingashandisi zviyero zvevakuru kana zvasvika pakuparadza hemp vanogona kutarisana nematambudziko makuru emutemo.
Zvokuita Kuti Uchengetedze Hemp
Kuti udzivise matambudziko acho, zviri nani kuti usarudze mbeu ye hemp. Imwe mbeu ine kuwedzera kwakanyanya muITC mazinga, kunyanya mushure mekukohwa. Nechikonzero ichocho, kuchenjera kunamatira kune dzakaedzwa uye dzakaedzwa mhodzi dzinoenderana nemirau.
Kuve nehemp ine yakakwirira mazinga eTHC kune njodzi uye inokanganisa bhizinesi rako. Kupa nguva yakawanda yekudzivirira matambudziko kuri nani pane kubata nematambudziko emutemo.
Semuenzaniso, shandisa mbeu dzakakodzera uye shandisa nzira dzakakodzera dzekukura uye yekukohwa. Nekuda kweizvozvo, hemp yako haizoedze kupisa uye iwe uchave nesarudzo dzakawanda yekutengesa hemp kune vazhinji vatengesi. Kana hemp yako ichiedza kupisa, shandisa simba rese remagweta nemirairo kugadzirisa nyaya yacho. Nenzira iyi unoona kuti wakachengeteka mukuita uku.
zvekuita kana hemp yako ichionesa kupisa
Saka wanga usingatarisire kuti chirimwa chako chemari chive chinoshura mbanje kukura - ndizvo zvakanaka, mitemo yakawanda inobvumira kurima zvisina hanya kwekupisa hemp. Asi tisati taenderera mberi neizvi - yeuka ichi ruzivo uye kwete mutemo wepamutemo, kurova sekunge iwe unonakidzwa nezvirimo uye kunyorera kune dzakawanda cannabis pamutemo nhau.
Namatira kutenderedza kusvika kumagumo uye ini ndichakuudza nzira yakanyanya kunaka yekuisa inshu yako kupurazi kubva pane iyi inopisa hemp njodzi.
Mazano: yakanakisa nzira yekukuisira iwe kubva inopisa hemp yakanyorwa yekutenga kontrakiti
Kutanga ita shuwa kuti bvunzo dzako dzinouya kubva kune yakanaka yekubvunzira lab uye haisi yeiyo yakazara-THC, asi delta-9 THC - iyi yemashiripiti kemikari inotaurira kana iwe uine hemp kana mbanje. Muedzo uyu haufanire kunge waitwa neGasi Chromatografia - asi yakanyanya kudzvanywa nemvura chromatografia, pamwe nehuwandu hwemaonero - LC-MS ipfupi. Kunyangwe iwe uchivimba nemhedzisiro yerabhodhi - ita kuti chirimwa chiongororwe zvakare - pamwe zvanga zvichingove kusagadzikana uye kwechipiri mafungiro achiratidza chimwe chinhu chakasiyana zvachose - genetics iri hemp haina yunifomu, kunyanya kana ichikura kubva kumbeu.
Zvakare, iyo 2019 hemp chirimwa muUnited State yakaputika kubva kunenge Makumi mashanu emahara muna 50,000 kusvika kudarika zviuru mazana maviri muna 2018. Iko kusheedzera kwekuda kwembesa dzehemp zvimwe kwakaona imwe mhando dzakatengeswa dzisina kufananidzira kushambadzira kwavo uye yakanga isingaite seyakadzi kana yakaderera muTHC sezvo vangadai vakaita mushure memamwe makore mashoma ekugadzira zvakanaka genetics.
Uine izvo mupfungwa, iwe unofanirwa kutendeukira kune yako hemp mbeu yekutenga chibvumirano mushure mekuwana iyo yechipiri maonero - izvi zvinofanirwa kukuudza izvo mushambadzi wembeu akazivisa - mazinga eTHC anotarisirwa uye chikamu chembeu yakaitwa nemukadzi - inofanirawo kupa izvo zvinonzi pasi pe Yunifomu Commercial Code (UCC) seyakafanana zvinhu. Iko kunofanirwa kunge kuri kutyora chibvumirano chinopa mutengi kune mamwe marapiro.
Chii chaunotaura - iwe hauna kupinda muchibvumirano chakanyorwa nemutengesi wembeu yako uye wakarima hupenyu hwako hwese kuchengetedza mune ino hemp boom isina chakaipirwa. Huye, magweta anogona kubatsira nemari yakawanda kana zvasvika pakuomesera kodzero dzekondirakiti - asi isu hatigone kufamba nekufamba kwenguva. Kana pasina kondirakiti yakanyorwa, zvigadziriso zveUCC zvinopa humwe humbowo hwekuita chibvumirano chako. Ndapota shandisa chibvumirano chakanyorwa paunenge uchitenga hemp mhodzi mune ramangwana - iyi ndiyo mhuka yekumavirira, saka chenjerai pakuita bhizinesi.
Saka mushure mekuraira imwe pfungwa yechipiri, uye nekuwana kopi yemvumo yekutenga mhodzi, fonera Gweta rako kuti vaone zvavanofunga nezvazvo.
Chii icho icho - iwe hauna magweta nekuti iwe unokwanisa kuverenga futi, hausi iwe mukomana uyo anga asina chibvumirano chakanyorwa - zvakanaka, zvakanyatso - Wakave negehena rezuva - kwete zvine musoro mukutenderedza munwe wangu kwauri kuti usavharire kumashure kwako usati waenda mubhizinesi nemombe.
Bvunza Gweta reHmp - neizvozvo ndinoreva gweta rine ruzivo rwebhizinesi mukusimbisa zvibvumirano - uye netariro vamwe vekurima kana hemp ruzivo kuti vakwanise kuonga nuances iri muindasitiri.
Gweta rako rinogona kukubatsira kufamba kwete chete mitemo yenyika yako - kana iyo Federal Regulations kana nyika yako ikavabatanidza muchirongwa chavo chehemp - asi zvakare murau nemirau yeiyo yako hemp chirimwa - izvo zvinowanzopa inopisa hemp iyo vasina mhosva vakura.
Yakanyanya kupisa hemp iri kuUSA?
Se parutivi ndinofunga kuti 2019 inogona kunge iri iyo goho rakakura kwazvo rekurima mbanje inorimwa muUnited States - asi izvi zvinongoitika nekuti mahekita mazhinji ezvirimwa zvehemp anogona kuzoyedza kupisa nekuda kwekuti indasitiri itsva yehemp iri sei.
Tevere, inguva yekubata nemutengesi wembeu yako. Bhizinesi haridi magweta zvakanyanya senge munhu anotevera - saka usatanga neiri tsamba inotyisidzira yekudaidzira. Sezvineiwo, iwe watoisa iwo machinda akakodzera muchibvumirano chekutenga mhodzi yehemp kuitira kuti chinhu chakadai chiitike. Iwe uri kubata ne genetics pano - zvinhu zvinongo svetuka dzimwe nguva kana mbeu dzakabatanidzwa. Kana iwe uri kuitawo pasina chibvumirano chakanyorwa, ndine tariro iyo kambani yembeu yawakatenga kubva kune yakanaka uye inobatsira kuti udzore mutengo wako wakarasika - pachinzvimbo chako unonyora bhajeti rewongorora dzakaipa uye maposita pane avo venhau. Kana zvinhu zvikashata, kumhan'arira hakusi chinhu chakanyanya kunaka kuita.
Iwe unoona kukuvadzwa kwako kunogona kusanganisira kwakarasika purofiti - asi izvo zvinofungidzirwa chaizvo neindasitiri nyowani - uye zvototadza kuratidza, asi mitengo yakaoma senge mbeu dzako uye zvinovaka muviri wako, basa rako - izvi zvirinyore kukuvadza zvinonzwisisika kupora.
Mushure mekuedza kuvhara mabheseni ako uye kusimbisa iyo inopisa hemp ine maonero e2. Ipapo iwe unofanirwa kutevedzera mitemo yenyika yako kuti uzvidzivirire iwe seyakagadzira husina hanya - yeuka iyo .3% ye delta-9 THC ndiwo muganho uri pakati pehekasi nembanje - pasi pemutemo we federal.
Saka izvo muganho pakati pekuregeredza uye nechinangwa mutsetse wekuti kana ukayambuka - uri panjodzi yemhosva mhosva - izvo zvausingafanirwe kuita nekuda kwehuwandu hemp inokura iyo huremu inorema kwazvo mhosva - kunyangwe mumatunhu emutemo nekuti iwo anoda marezinesi iwe hauna . Saka usave usina hanya kana iwe uine chokwadi chekuti hemp yakanyanya kupisa - iwe unofanirwa kutevera mutemo nekuchengetedza yako .... Butt.
Saka izvozvo zvinoreva kuti uchafanira kuparadza hemp yako - uye haugone kurima mhodzi iyoyo gore rinouya nekuti nyika zhinji dzinoda kuti uve nekutenda kwakanaka, kana certification yembeu, nekuti iwe uchizovimbisa icho chaunokura chichava maindasitiri. hemp kwete mbanje. Nyika dzine miganhu pamakore mangani aunoregedza kurera mbanje uye uchifunga kuti ndiyo hemp usati waisa pangozi rezinesi rako.
Tsvaga izvo izvo dunhu rako zvinoda kuparadza, kana kuraramisa izvo hemp zvaunokwanisa.
Zvichida iwe unobvisa iyo hemp buds kubva pamombe kana iyo nyika ichikubvumidza kuti uedze uye utengese kune fiber - asi zvirimwa zvakasiyana zvachose, saka iwe unogona kunge uri kunze kwemhanza. Zvekare, rezinesi rako rekudyara hemp rakakosha kudarika rimwe rakashata rekupisa - saka tevedza mutemo uye uzive kuti iyi ndiyo nzvimbo yekumavirira uye indasitiri diki inoda kukura uye shandisa iyo doko rakachengetedzwa kuti bhizinesi rako riende imwe mwaka.
Hemp Litigation Iri Kuuya muPisa
Chekupedzisira, unogadzirisa nemutengesi wembeu kana yaive mhosva yavo chaiyo kuti chirimwa chako chakauya kuchipisa. Genetics yeBPD uye THC inonyengera - imwe mbeu mune imwe mamiriro ichakura nenzira dzakasiyana mune imwe - yeIllinois, Cherry Wine rave riri mbeu yakagadzikana - asi iyi indasitiri yekugadzira genetics nyowani, zvitsva zvinodyarwa - uye hatizive chii inotevera inotevera.
Uye nekuti isu tiri parutivi rwekubuda ropa kwe cannabis tekinoroji - ngatidzokorore - asi chekutanga senge & nyorera kana iwe uchifarira izvi - nekuti iwe uchaona ziviso ye cannabis pamutemo nhau - yega michero.
Kupedzisa: kana yako hemp's delta-9 THC level iri pamusoro pe0.3%, yako rezinesi inoda zvimwe zviito.
Hezvino zvekuita kana wako hemp chirimwa chinouya chiri kupisa pane THC.
Tora wechipiri maonero pane ako hemp's THC mazinga
Tarisa yako hemp mbeu yekutenga kontrakiti mazwi
Fonera Gweta rako re cannabis
Ongorora izvo mutemo nemirairo zvinoti nezve hemp nehupamusoro THC mazinga
Bata wako mutengesi wembeu maererano nedambudziko neHemp's THC mazinga
Bvumirana nemirairo inokupa iwe yakachengeteka harbor kubva kune isina hanya inopisa hemp.
Paradza iyo hemp, kana svovera zvaunokwanisa
Faira sutu, kana kupinda muchibvumirano chekugadzirisa kana mbeu mutengesi ine mhosva yekurasikirwa.